Umdlavuza webele nezinselelo abezempilo ababhekene nazo
UMDLAVUZA webele yilona hlobo lomdlavuza oluhamba phambili oluhlasela abantu besifazane eNingizimu Afrika, kumele ngabe lolu hlobo lomdlavuza abantu besifazane bazi kakhulu ngalo futhi abafikelwa wukuthi bafihle uma bephethwe yilo. Isithombe esigciniwe: IANS ARCH
PHILI MJOLI | February 5, 2020
UMDLAVUZA webele yilona hlobo lomdlavuza oluhamba phambili oluhlasela abantu besifazane eNingizimu Afrika, kumele ngabe lolu hlobo lomdlavuza abantu besifazane bazi kakhulu ngalo futhi abafikelwa wukuthi bafihle uma bephethwe yilo.
Lokhu kushiwo uDkt Justus Apffelstaedt wenkampani yongoti abahlinzayo Apffelstaedt and Associates eseKapa, owungoti wokuhlinza izicubu ezithambile okubalwa nakho ukuhlinza ngenhloso yokwelapha umdlavuza.
Uthe yize sekunesikhathi eside kangaka kufundiswa ngomdlavuza webele kodwa kusekhona ukuzenyeza okukhulu kubantu abahlaselwe yilo mdlavuza abaye bazizwe sengathi ukuba ngabantu besifazane kwabo sekunciphile uma behlinzelwa lo mdlavuza.
“Kule minyaka edlule, ukwelashwa komdlavuza kulokhu kuthuthuka okusho ukuthi uma kutholiwe ukuthi unomdlavuza akusho ukuthi uzofa okuyinto ebicatshangwa phambilini.
“Ingxenye yokwelashwa kwalesi sifo esenenkinga okwamanje wukuthi imishanguzo yokuselapha ingaholela ekutheni isiguli sihlaselwe yizifo zokuphazamiseka komqondo. Ngikholwa wukuthi kubalulekile ukuthi le ngxenye ibhekisiswe njengaso isifo sokuphazamiseka emqondweni,” kusho uDkt Apffelstaedt.
Uthe iziguli ezinomdlavuza webele kwesinye isikhathi ziba novalo zesabe ukufa, zibalise ngokuthi impilo yazo isizoshintsha, ukushintsha komzimba, ukuthi isimo semali sazo sizoshintsha ngoba uma zinalesi sifo zidinga imali nokunye.
Lokhu kukhathazeka kwezinye iziguli kuholela ekuphazamisekeni komqondo.
Usho kanjena nje uDkt Apffelstaedt, inhlangano yezempilo emhlabeni, iWorld Health Organisation (WHO), ithi bangu-17 abantu ababulawa wumdlavuza ngumzuzu owodwa emhlabeni.
NgokweWHO, lezi zibalo zingehla uma kungaqiniswa ekutheni iziguli ezinalesi sifo zisheshe zitholwe ukuze ziqale uhlelo lokwelashwa ngokushesha.
Njengoba namhlanje kuwusuku lokuqwashisa nokufundisa ngalesi sifo iWorld Cancer Day, iWHO kwi-website yayo iveze ukuthi emazweni asethuthukile kanjalo nanezinsiza zezempilo ezisezingeni eliphezulu, iziguli zisabhekwa umdlavuza usuhambe kakhulu.
Iqhubeka ithi ukutholwa kweziguli kusenesikhathi yikhona kungaba yikhambi elingalawula kangcono umdlavuza emhlabeni.
Lokhu kungasiza ngokuthi isiguli silandele zonke izigaba zokuhlolwa kusenesikhathi.
Isiguli singathola ukuhanjiswa ezikhungweni zezempilo ezifanele, kusize ekutheni konke okwenziwayo esigulini kwenziwe kusanesikhathi.